Ejjeennoon Sudaan hidha Haaromsaarratti jijjiiramaa laata? - BBC News Afaan Oromoo
Sudaan mormii walirraa hin cinne erga gaggeessiteen booda torban darbe Omaar al-Bashiriin aangoorraa buusaniiru. Humni waraanaas yeroo ce'umsaa waggoota lamaa gaggeessuuf gara aangootti dhufeera.
Yeroo ammaa kana biyyattiin siyaasa ifatti adda bahee hin beekamne keessa jirti. Sudaan dhimma Hidhaa Haaromsa Laga Abbay irratti Itoophiyaa sirriitti deggerti ture. Gara fuula duraa garuu maaltu ta'a laata?
Sirna awwaalcha Injinar Simmanyaw irratti waan jedhame
Sudaan Hidhaa Haaromsa Laga Abbayaa ilaalchistee jalqaba irraa kaastee Itoophiyaa deggeraa turteetti. Yeroo maree waloo Itoophiyaa, Sudaaniifi Masiriin waliin qabaataa turanitti Sudaan Itoophiyaa waliin hiriiraa turteetti.
Masiriin garuu yaada Hidhaa Haaromsaa sana jalqaburraa mormuudhaan karaa danda'ame maraan pirojektii kana dura dhaabbachuu yaalaa turteetti. Kallattiinis ta'e karaa kallattiin halaa yaalii taasiftu kana hanga har'aa ittuma fuftees jirti.
Sudaan yeroo ammaa pirezedaantii waggoota 30 ishee Omaar al-Bashiriin bulche ofirraa kaastee waan fuula duratti ishee mudatu ifatti hin bariin jirti.
Jijjiirama mootummaa kana waliin walqabatee dhimma Hidhaa Haaromsaa irratti ejjennoo qabdu jijjiirtii laata?
Gama Itoophiyaatiin maree dhimma Hidhaa Haaromsa Laga Abbayaa adda durumaatiin gaggeessaa kan turaniifi yeroo ammaa kana ammoo Daarektera Ol-aanaa Waajira Teekinika Naayil Bahaa kan ta'an Obbo Faq-Ahimad Nagaasha, Sudaan Hidhaa Haaromsaa Abbayaa ilaalchisee ejjennoo qabdi turee itti fufti jedhanii amanu.
Masiriin garuu akkasumaan callistee cinaa dhaabbattee kan ilaaltu miti.
Qabxiin jalqabaa Obbo Faq-Ahimad kaasan, ijaarsa hidhaa kanaa deggeruun Sudaaniif murtee siyaasaa osoo hin taane dhimma faayidaa biyyaadha. "Invastimantii tokko malee faayidaa guddaa irraa argatu," jedhan.
Sababiin akka Omaar al-Bashir aangoorraa ka'an taasise mormii gatiin daabboo dabaluun jalqabee gara gaaffii qaala'insa jireenyaatti darbedha. Hidhaan Haaromsaa kun ammoo walumaa galatti gaaffii misoomaa biyyattiin qabduuf deebii akka kennu ibsu Obbo Faq-Ahimad.
Akka Obbo Faq-Ahimad jedhanitti Sudaan baasii tokko malee humna ibsaa hanga GW kuma sadii argatti. Kana malees, Itoophiyaarraa gatii gadi aanaatiin ni bitatti jedhu. kana fayyadamuudhaan ammoo industiriiwwan isaanii, misooma qonnaafi horsiisa qurxummii isaanii ittiin baballifachuu danda'u.
Erga Sudaan Kibbaa qabeenya uumamaa kan jikita boba'aa fudhattee irraa adda baatee Sudaan 'argitee dhabdeetti'. Kanaaf pirojektiin Hidhaa Haaromsaa kun biyyattiidhaaf akka 'manna waaqarraa bu'eefiitti' kan ilaaluu dandeessdha.
Sudaan kan jibbitu rakkoo lolaa osoo hin eegamiin waggaa waggaan irra ba'udha. Hidhaan Haaromsaa kun rakkoo kanas ni furaaf. Doloolloo lolaan irratti kuffiisu qulqulleessuudhaaf baasii waggaa tokko kessatti hanga dolaara miliyoona torbaatamaa baasuu maltu hambisaaf.
Amantoonni Sudaan Imaami irratti mormii kaasan
Waldhabdeen eenyuunuu hin fayyadu
kana waan ta'eef mootummaan kamillee yoo dhufe faayidaa guddaa kana kan caaluufi dhimmi dursi kennamuuf kan biraan ni jira jedhanii akka hin amanne ibsu Obbo Faq-Ahimad.
Yaaduma walfakkaatuun dhimma Abbayaa irratti qorannoowwan hedduu kan gaggeessan Dr. Yaa'iqoob Arsaanoo Hidhaa Haaromsaa deggeruun dhimma faayidaa biyyaalessaati malee murtee siyaasaa miti jedhanii amanu.
Haata'u malee, mootummaa Sudaan iti aanu kanaaf dhimmi Hidhaa Haaromsaa waan dursi kennamuufii qabu ta'uu isaa adeemsa keessa kan arginu ta'a jedhan Dr. Yaa'iqoob.
"Faayidaa biyyaalessaa kanaaf jedhaniiti kan ejjennoo isaanii hin jijjiirre," jechuudhaan dubbatan.
Garuu biyyattiin yeroo ammaa kana labsii yeroo muddamaa keessa waan jirtuuf hanga Sudaan biyya hundeeffattee maree biyyoota sadanii irratti hirmaattutti yeroo fudhachuu mala jedhu.
Erga ijaarsi Hidhaa Haaromsa Abbayaa kun jalqabamee kaasee Masiriin Sudaan irratti dhiibbaa gochaa akka turteefi ammallee dhiibbaan kun jabaatee akka itti fufu dubbatau, Obbo Faq-Ahimad.
"Warri Masirii amma jabaatanii socho'u. Dhiibbaan kunis Sudaan irraatti ni jabaata, " jedhan.
Haata'u malee, Sudaan hanga har'aa dhiibbaa gama Masiriin irra ga'u dandamattee dggersa tasisaa turteetti. gara fuula duraattis deggersa kana itti fuftee kennite jedhanii amanu.
Masiriin jalqabu irraa kaastee Sudaan akka Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasistuuf kan isaan hin goone hin turre kan jedhan Dr. Yaa'iqoob, milkaa'inni dhiibbaa Masirii itti aanu hunda caalaa cimina Itoophiyaa irratti kan hundaa'u ta'a jedhu.
Gama kanaan ammoo Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad ejjennoo cimaa agarsiisuu isaanii dubbatu.
"Waanti guddaan Itoophiyaan Hidhaa Haaromsaa kana ijaaruudhaaf dandeettii isheen qabdudha," kan jedhan Dr. Yaa'iqoob Masiriin karaa Sudaanis haata'u karaa biraatiin dhiibbaa kanaan dura taasisaa turte ittuma fufti jedhan.
Miseensonni Loltuu Mana Maree Nageenyaa Finfinnee galan
Kun osoo kanaan jiruu miseensonni Loltuu Mana Maree Nageenyaa Finfinnee galaniiru.
Miseensonni Loltuu Manni Maree Jeneraal Gelaaledin Al-Sheekiin durfamu kun yeroo gara Itoophiyaa dhufanis karaa Ministeera Dhimma Alaatiin simannaan taasifameeraaf.
Jeneraal Gelaaledin Al-Sheekiin haasawaa aanga'oota waliin taasisaniin mormii lammileen biyya Sudaan Omaar al-Bashiriin aangoorraa buuse akka deebii argatuuf malee dheebuu aangoo qabachuu hin qabnu jedhaniiru.
Kanaan achittis waanta biyya isaaniitti taasifamaa jirus Itoophiyaan itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ishees dinqisiifataniiru.
Du'a Injinar Simmanyaw Baqqala: Sirna awwaalchaa irratti waan jedhame
Mormii Pirezdaant Bashiir sababeefachuun amantoonni Sudaan imaami irratti ka'an
14 Amajjii 2019